तपाईं बंधक पुनर्वित्त अघि थाह छ के | बन्धकी ऋण र बन्धकी पुनर्वित्त
पुनर्वित्त बंधक छ अघि के तपाईंलाई थाह गर्नुपर्छ
मूल ठाँउ बन्धक एक नयाँ घर प्राप्त गर्न बन्धक भनिन्छ गर्न पुनर्वित्त. पुनर्वित्त एक उधारकर्ता फरक र राम्रो चासो अवधि र दर प्राप्त गर्न सक्छ कि एक विकल्प छ. जब पहिलो घर ऋण पहिले नै भुक्तानी छ, दोस्रो ऋण नयाँ बनाउन संग recreated गरिनेछ बन्धक सट्टा र त्यसपछि दूर मूल बन्धकी फेंक.
Borrowers राम्रो क्रेडिट इतिहास छ भने, आफ्नो पुनर्वित्त पहिले भन्दा अझ राम्रो तरिका हुन सक्छ.
उदाहरणका लागि, आफ्नो गतिविधिलाई एक चर रूपान्तरण गर्न सक्छन् ऋण एक स्थिर चासो दर पनि कम ब्याज दर प्राप्त गर्न सक्छन्. Borrowers अझै खराब क्रेडिट वा यदि तर जान पनि धेरै ऋण छ, पुनर्वित्त बन्धक तिनीहरूलाई लागि जोखिमपूर्ण हुनेछ.
उच्च चासो दर र एक अस्थिर अर्थव्यवस्था दुवै लागि कुनै पनि आर्थिक अवस्थामा, यो एक घर बन्धकी मा भुक्तान गर्न निकै गाह्रो हुन सक्छ र तपाईं आशा भन्दा मुश्किल हुन सक्छ.
र अहिले तपाईं यो अवस्थामा आफूलाई पाउन भन्ने विचार गर्छन्??
त्यसैले यो बन्धकी पुनर्वित्त विचार गर्न आफ्नो समय हुन सक्छ.
यो पुनर्वित्त सबै को पहिलो अज्ञानता मा झूट पुनर्वित्त मा खतरा छ. तपाईं पुनर्वित्त बारेमा ठ्याक्कै थाहा छैन भने, यो आफ्नो ब्याज दर वृद्धि भन्दा यो lowering संग तपाईं चोट सक्छ!
त्यसैले, उदाहरणका लागि, आफ्नो क्षेत्र मा प्रत्येक उधारदाताओं वा बैंक को वर्तमान दर तुलना जस्तै तपाईं कम्तीमा आधारभूत ज्ञान थाह हुनुपर्छ.
पुनर्वित्त को परिभाषा के हो?
पुनर्वित्त नयाँ रही प्रक्रिया छ बन्धक ऋण कम चासो दर भएको देखि मासिक भुक्तानी कम लागि, ठूलो खरिदका लागि आफ्नो घर बाहिर नगद लिएर वा बन्धक कम्पनी परिवर्तन. धेरै जस्तो मान्छेहरु पुनर्वित्त बन्धक जब तिनीहरूले आफ्नो घर मा इक्विटी छ, बंधक कम्पनी गर्न owed राशि र घर को लायक बीच फरक जो छ.
तपाईं गर्नुपर्छ पुनर्वित्त बन्धक ?
4 लागि योजना गर्न कुराहरू बन्धक पुनर्वित्त
1. लागि संलग्न गरिनेछ जो थाह बन्धक पुनर्वित्त
लागि धेरै पेशेवर छन् तापनि बन्धक पुनर्वित्त अचल सम्पत्ति Appraisers र धितो underwriters जस्तै ती महत्त्वपूर्ण भूमिकामा काम गर्न आउनेछ, आफ्नो प्राथमिक सम्पर्क कुनै प्रकार लागि आफ्नो ऋणदाता हुनेछ पुनर्वित्त. तपाईं बन्धकी पुनर्वित्त प्रक्रिया मार्फत तपाईंको ऋणदाता संग पहिले काम गर्न हुनेछ. अर्कोतर्फ, आफ्नो ऋणदाता बन्धकी पुनर्वित्त को आफ्नो लेनदेन संलग्न गरिनेछ जो एक टीम संग काम गर्नेछ. तपाईं सम्बन्धित व्यक्ति को सबै पूरा हुनेछ तापनि, यो तपाईं बन्धकी पुनर्वित्त को आफ्नो भूमिकामा थाह हुनुपर्छ भनेर एकदम महत्त्वपूर्ण छ.
ऋणदाता वा ऋण जो अधिकारी आफ्नो क्रेडिट मूल्यांकन गर्नेछ भन्ने व्यक्ति छ, वित्तीय, तपाईं एक पुनर्वित्त लागि योग्य भने र जानकारी रोजगार हेर्न. जब तिनीहरूले आफ्नो मूल्यांकन पूरा, तिनीहरूले वित्तपोषण विकल्प संग प्रदान र आफ्नो बन्धकी आवेदन पूरा नभएसम्म पनि तपाईंलाई मदत गर्नेछ. तिनीहरूले ऋण अनुमोदन प्रक्रियामा आफ्नो स्थिति को ट्रयाक राख्न हुनेछ.
ऋण प्रोसेसर तयार हुनेछ भन्ने व्यक्ति जो छ आफ्नो बन्धक ऋण बंधक underwriter गर्न पेश लागि जानकारी र आवेदन. तपाईं सबै उचित दस्तावेज समावेश छन् भनेर तिनीहरू पक्का हुनेछ, सबै संख्या सही गणना छन्, र सबै आफ्नो अनुमोदन मा एक समय सुहाउँदो निर्णय सुनिश्चित गर्न छ.
बन्धकी underwriter तपाईंको क्रेडिट इतिहास आधारित ऋण लागि आफ्नो योग्यता मूल्याङकन गर्नु हुनेछ भन्ने व्यक्ति जो छ, राेजगारीकाे इतिहास, सम्पत्ति, ऋण, र अन्य कारक.
अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन वास्तविक सम्पत्ति को मूल्य निर्धारण गर्न unbiasedly आफ्नो घर र सम्पत्ति विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने व्यक्ति जो छ. तिनीहरूले नै गर्नेहरूलाई सहयोग प्रदान गर्नेछ, व्यवस्थापन, बेचन, मा लगानी र अचल सम्पत्ति सुरक्षा पैसा उधारो.
प्रतिनिधिहरूको बन्द गर्ने निरीक्षण र समापन समन्वय वा हुनेछ भन्ने छ “बन्दोबस्त” आफ्नो ऋण को, समापन कागजातहरू रेकर्ड, र उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई र संगठन गर्न पैसा तिर्न.
यी मानिसहरू को सबै आफ्नो बन्धकी पुनर्वित्त मा विभिन्न भूमिकाहरूको तर महत्त्वपूर्ण छ. तिनीहरूलाई भर पर्नुको, प्रश्न, र तिनीहरूले तपाईं को लागि काम गर्दै भनेर सम्झना.
(सन्दर्भ : zillow.com)
2. बन्धक पुनर्वित्त लागि आफ्नो व्यक्तिगत कागजात भेला
When you meet your lender to एक बन्धकी लागि लागू पुनर्वित्त, तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक हुनेछ, जस्तै तपाईं आफ्नो घर क्रय लागि गरे जस्तै. यी कागजात आफ्नो ऋणदाता आफ्नो योग्यता निर्णय गर्न अनुमति हुनेछ, आफ्नो डब्ल्यू-2s सहित, बैंक बयान, र कर फिर्ती.
बन्धक पुनर्वित्त को प्रक्रिया घर खरीद प्रक्रिया धेरै त्यस्तै छ. तपाईं नयाँ सर्तहरू वा नयाँ ऋणदाता संग एक नयाँ ऋण सिर्जना छौं (तपाईं आफ्नो मूल ऋणदाता वा नयाँ ऋणदाता प्रयोग गरिरहनु कि). तपाईं सुरुमा आफ्नो घर खरिद गर्दा प्रक्रिया तपाईं प्रदान नै कागजात र जानकारी आवश्यकता हुनेछ.
तल निम्न कागजात तपाईं ऋणदाता गर्न प्रदान गर्न के छ:
• विगतमा वर्ष देखि डब्ल्यू-2s, सायद दुई
• तीन महिना गर्न विगतमा एक देखि पे चेक stubs
• कुनै पूरक आय को प्रमाण
• पछिल्लो दुई वर्ष देखि कर कागजातहरू, सबै पृष्ठ र कार्यक्रम सहित
• तपाईं आत्म-कार्यरत छन् भने, यो हो संभावना तपाईं वर्तमान वर्षको मुनाफा-र-हानि-वक्तव्य प्रस्तुत छ छौँ, अन्य दस्तावेज बीचमा
• तीन महिना गर्न विगतमा एक देखि जाँच र बचत बैंक बयान
• लगानी खाता बयान - सहित 401(K), स्टक, इरा र आपसी धन - विगत एक तीन महिना देखि
सबै ऋण लागि • तथ्याङ्कहरू, सहित कार ऋण, विद्यार्थी ऋण, क्रेडिट कार्ड र आफ्नो वर्तमान बन्धक
• आफ्नो चालक अनुमतिपत्र प्रतिलिपि
भन्नु : दस्तावेज को अवधि ऋणदाता देखि ऋणदाता गर्न फरक पर्न सक्छ
तपाईं तलाकशुदा हुनुहुन्छ भने, तपाईं सम्बद्ध छुटानाम भएपछि पतिले पत्नीलाई दिने पैसा वा बच्चा समर्थन दस्तावेज साथ आफ्नो सम्बन्धविच्छेद उर्दी प्रतिलिपि प्रदान गर्न आवश्यक.
3. मुछिएको को दस्तावेज बुझ्ने
जब तपाईं आफ्नो घर खरिद, तपाईं पूर्व र समापन मा धेरै कागजातहरू समीक्षा र हस्ताक्षर. जब तपाईं आफ्नो बन्धकी पुनर्वित्त, यो नयाँ दर र शर्तहरु संग एक नयाँ ऋण छ तपाईं त्यसै गर्न आवश्यक हुनेछ. फेरि यी कागजातहरू समीक्षा र आफ्नो ज्ञान ताजा गर्न केही समय लिनुहोस्.
तपाईं अन्त्य गर्न पछिल्लो हेर्नुहोस् छौँ फारामहरू
वर्दी आवासीय ऋण आवेदन: यो नै छ बन्धक ऋण तपाईं आफ्नो घर खरिद गर्दा आवेदन तपाईं पूरा, तपाईं बारेमा कुञ्जी जानकारी कैप्चरिंग, आफ्नो वित्त, र आफ्नो संभावित बन्धक को विवरण. यो फारम संग, तपाईं आफ्नो मासिक आय बारेमा जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक छौँ, संयुक्त परिवारमा खर्च, सम्पत्ति र देनदारियों, र आफ्नो सामाजिक सुरक्षा नम्बर र वैवाहिक स्थिति व्यक्तिगत जानकारी यस्तो. यो जानकारी आफ्नो ऋणदाता नयाँ ऋण लागि आफ्नो योग्यता मूल्याङकन गर्नु मदत गर्नेछ.
राम्रो विश्वास अनुमान: आफ्नो पूरा ऋण आवेदन पेश तीन व्यापार दिन भित्र, आफ्नो ऋणदाता राम्रो विश्वास अनुमान संग प्रदान गर्नुपर्छ (GFE) आफ्नो ऋण सर्तहरू रूपरेखा, खाता जानकारी एस्क्रो, र आफ्नो ऋण नयाँ संग सम्बन्धित सबै अनुमान लागत समापन मा कारण हुनेछ.
ऋण प्रकटीकरण विवरण मा सत्य: तीन व्यापार दिन भित्र आफ्नो बन्धकी आवेदन पूरा पछि, आफ्नो ऋणदाता ऋण प्रकटीकरण कथन मा तपाईं सत्य पठाउने. यो प्रकटीकरण financed भइरहेको कुल राशि सामेल, आफ्नो वित्त चार्ज, आफ्नो वार्षिक प्रतिशत दर (सहित ब्याज दर, अंक, दलाल शुल्क, र अन्य लागत), र आफ्नो भुक्तान तालिका. तपाईंको ऋणदाता समापन मा प्रकटीकरण उधारो मा तपाईं आफ्नो सत्यका एक अद्यावधिक संस्करण दिनेछु.
लेट मा 2015, उधारदाताओं को GFE मा हाल जानकारी जोडती कि नयाँ ऋण अनुमान फारम र ऋण प्रकटीकरण सत्य प्रयोग सुरु हुनेछ
तपाईं अन्त्य मा साइन छौँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फारम
HUD-1 सेप्टेम्वर विवरण: यो कुञ्जी कागजात वास्तविक शुल्क सबै प्रदान, आफ्नो ऋण बन्द संग सम्बन्धित लागत र क्रेडिट. तपाईं समीक्षा लागि HUD-1 बन्दोबस्त कथन प्राप्त गर्न सही छ 24 आफ्नो समापन अघि घण्टा. यो ध्यान तपाईं गर्न सहमत ऋण लागि हस्ताक्षर छन् सुनिश्चित गर्न HUD-1 समीक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण छ. यो HUD-1 को पृष्ठ तीन मा, तपाईं चाँडै र सजिलै वास्तविक लागत गर्न आफ्नो GFE देखि अनुमान तुलना गर्न अनुमति दिन्छ भन्ने तालिका पाउन छौँ.
यो Promissory नोट: यो कानूनी कागजात तपाईं जो तपाईं सहमत गर्न सर्तहरू अनुसार ऋण लिएको पैसा तिर्नु सहमत साइन इन छ. यो ऋण को विवरण दिइएको, यो मिति भुक्तानी गरिने छन् र पठाइने गर्न भुक्तानी छन् जहाँ गर्दा. यो पनि तपाईं समय मा एक भुक्तान गर्न सकेनौं भने हुन सक्छ के भन्छन्.
ट्रस्ट को काम: यो कागजात हस्ताक्षर गरेर, सहमत रूपमा तपाईं ऋणदाता तपाईं आफ्नो ऋण लिएको पैसा तिर्नु असफल गर्नुपर्छ फौजदारी गरेर सम्पत्ति फिर्ता लिन सही दिइरहेका छन्. यो कागजात पनि एक उधारकर्ता रूपमा आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी भन्छन्.
ट्रस्ट को काम: विक्रेता तपाईं स्वामित्व स्थानान्तरण गर्न काम साइन हुनेछ, र यो सबै खरीदारों को नाम हुनेछ. तपाईं पूर्ण मा घर लागि भुक्तानी छन् सम्म आफ्नो नाम तेस्रो-पक्ष गुठि संचालक संग आयोजित गरिनेछ. तपाईं समापन मा काम को एक प्रतिलिपि प्राप्त हुनेछ.
Affidavits र वर्णन: यी तपाईं प्रदान सबै जानकारी साँचो छ घोषणा बयान हो, सम्पत्ति आफ्नो प्राथमिक निवास हुनेछ र सम्पत्ति मा आवश्यक सबै मरम्मत समापन गर्न पूर्व गरियो भनेर सहित.
4. यो लागत निर्धारण
आफ्नो बन्धकी पुनर्वित्त तपाईं प्रति महिना डलर सयौं बचाउन सक्छ, तर तपाईंलाई डुबुल्की मार्न अघि, यो तपाईं सबै सम्बद्ध लागत सजग छौं महत्त्वपूर्ण छ. पुनर्वित्त तपाईं लागि वित्तीय अर्थमा बनाउँछ कि तपाईं एक लागत-लाभ विश्लेषण गर्न र निर्धारण गर्न आफ्नो ऋणदाता संग राम्ररी काम गर्न चाहनुहुन्छ छौँ.
तपाईं अघि थाह गर्नुपर्छ कस्तो पुनर्वित्त बंधक छ
मा ट्याग: बन्धक पुनर्वित्त पुनर्वित्त पुनर्वित्त बंधक पुनर्वित्त
←3तपाईं आफ्नो बंधक मा बन्द तिर्नुपर्छ चाहनुहुन्छ भने तपाईंले के गर्नै पर्छ कदम7वर्ष वा कम (1) | बन्धक, पुनर्वित्त बंधक, बन्धकी तिर्नको, ऋण मुक्त, बन्धक उन्मूलन
नगद या एक बन्धकी संग एक घर खरीद | बन्धक, बंधक →
सबैले देशमा एक टुक्रा चाहनुहुन्छ. यो केवल निश्चित लगानी छ. यो एक कार वा लुगा धुने मिसिन जस्तै गर्व मा प्रहार गर्न सक्दैन. भूमि मात्र दस वर्ष मा यसको मूल्य दोब्बर हुनेछ.
— शमू हृ € ोफर्ड
आइतवार, 04/10/2015 5:28 प्रधानमन्त्री
8 कुरा एक बन्धक ऋण लागू अघि थाह